ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Jul 21, 2012 in Copy/Paste | 33 comments
ဘင်္ဂလားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဘင်္ဂါလီမက ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာကိစ္စပဲ မြန်မာဘက်က
ပြန်ခေါ်ပါဆိုပြီး သူတို့ဘက်မှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ်နဲ့ နေနေတဲ့ စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေကိုမြန်မာဘက်အတင်းပြန်ပို့နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကော့ဘဇားဒေသက မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိနေတဲ့
ရိုဟင်ဂျာအမည်နဲ့ စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေကိုလည်း မဲပေးခွင့်တွေ ပယ်ဖျက်နေတာ
ဒါဟာ လက်ရှိအာဏာရ အဝါမီလိဂ်က သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက် ဘင်္ဂလား အမျိုးသားရေးနဲ
့ အစ္စလာမ်မစ်ဝါဒီ ဘီအင်န်ပီ လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲအသာမရအောင် လုပ်နေတာလို့
အမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့ အနောက်ကအမြင်မှာ လက်ရှိဘင်္ဂလားဝန်ကြီးချုပ် ရှိတ်ဟာဇီနာရဲ့
အဖေ ဘင်္ဂလားကျားကြီး ရှိတ်မူဂျစ် လက်ထက်ကတည်းက အဝါမီလိဂ်ဟာ ဘာသာရေးနဲ့
နိုင်ငံရေးကို စည်းခြားတဲ့သဘောထားမျိုးရှိတဲ့ လက်ဝဲယိမ်း လစ်ဘရယ်သမားတွေရဲ့ ပါတီလို့
ယူဆထားတာမို့ သူ့ပြိုင်ဘက် ဘီအင်န်ပီနဲ့ ယှဉ်ရင် အဝါမီလိဂ် အာဏာရနေတာမျိုးကို
သဘောကျကြပုံပဲ။ ဘီအင်န်ပီကတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဇီယာရာမန် စထောင်ကတည်းက
အစ္စလာမ်မစ်တွေရဲ့ပါတီ အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်တွေရဲ့ ပါတီလို့ သိထားကြတာကိုး။
ဟိုးအရင့်အရင်ကတည်းက ဘာသာရေးကို တံတိုင်းတစ်ခုလို အသုံးပြုနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့
ဘီအင်န်ပီက အဖွဲ့ကျတယ်၊ အဝါမီလိဂ်က သူတို့ကို ချီးထုပ်တွေ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေလို့သဘော
ထားပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် အားလုံးယိုတဲ့ချီး ပုဇွန်ဆိပ်ခေါင်းမှာပုံသလို မြန်မာပြည်ထဲ ပစ်ထည့်ချင်နေတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်တွေတုန်းက မြန်မာဒုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုတဲ့သူက ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စစ်တကောင်း
ဘင်္ဂါလီတွေကို လက်ခံပါမယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်လာတယ်၊ ဒါပေမဲ့ မြန်မာအစိုးရဘက်က
ဒီကိစ္စကို ရေငုံနေပြီး ဘင်္ဂလားဘက်က မီဒီယာတွေသာ ရေးကြသားကြ ထုတ်လွှင့်ကြတာကို
နောက်တော့ ကုလဒုက္ခသည် မဟာမင်းကြီးနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်တွေ့တော့မှ မြန်မာဘက်က
သဘောထားကို အားလုံး သိသွားကြတာ။
ဦးသိန်းစိန်က ဒီဘင်္ဂါလီတွေဟာ စစ်တကောင်းအနွယ်ဖွားတွေပဲ သူတို့ကို ပြန်မခေါ်နိုင်ပါဘူးလို့ အတိအလင်းပြောသွားတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ဖ-ဆ-ပ-လ ခေတ်က လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကိုဆက်ခံဖို့
ငြင်းဆန်ခွင့်မရှိတော့ အဲဒီတုန်းက နိုင်ငံသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရသူတွေရယ်၊
သူတို့က ဆက်ပွားလာတဲ့ သားရယ် မြေးရယ်ကို ခိုင်ခိုင်လုံလုံ အထောက်အထားပြနိုင်ရင်တော့ လက်ခံမယ်
ဘင်္ဂလားဘက်က ပြောနေတာက မြန်မာအစိုးရပြောပြောနေတဲ့ အထောက်အထားစာရွက်
စာတမ်း (မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ မွေးစာရင်း ဆိုတာမျိုးတွေ) ရှိတဲ့သူတွေက
သုံးသောင်းကျော်ရှိတယ် မရှိတဲ့သူတွေက လေးသိန်းလောက်ရှိတယ် လို့ဆိုတယ်။
ခိုင်လုံတဲ့ အထောက်အထား ရှိသူနဲ့ သား မြေ ၂ ဆက်ကို လက်ခံမယ်ဆိုရင်တောင်
အရပ်ထဲမှာပြောပြောနေတဲ့ အဖေတစ်ယောက် သားသမီး အယောက် ၂၀ ဆိုတဲ့ ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေရဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မွေးဖွားနုန်းကိုလည်း ထည့်တွက်ဖို့
လိုမှာလည်း သတိထားမိတယ်။ သုံးသောင်း အမြှောက် နှစ်ဆယ် ကို နောက်ထပ် အမြှောက်
နှစ်ဆယ် ဆိုရင်လည်း မလွယ်လှဘူး။
လောလောဆယ်ဆယ် ဦးသိန်းစိန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရဟာ ရာစုဝက်လောက် နာမည်ပျက် ပုံရိပ်ဆိုးခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပုံရိပ်ကောင်းပြန်းထွက်အောင် အသဲအသန်ကျိုးစားနေရတာ သတိထားမိတယ်။ ကျိုးစားပေမဲ့ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲက ကျပ်မပြည့်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်အချို့ရယ်၊ နောက်ကွယ်က သူငယ်နာမစင်သေးတဲ့သူတွေရယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှာကို အရမ်းစိုးရိမ်နေတဲ့ သိုက်တူးသမားတွေရယ်၊ သူတို့ကိုယ်သူတို့ မရှိမဖြစ်တွေ သူရဲကောင်းတွေ ချောက်ထဲမကျအောင် ကယ်တင်တဲ့သူတွေလို့ အထင်ရောက်ရင်း ရင်ဘက်ပြားကပ်ကပ်ကို ကော့ကော့ပြနေတဲ့ သူတွေရယ်က ကတစ်ဖက် အတိုက်အခံဘက်မှာလည်း ခံစားခဲ့ရတာကို စားမြုံ့ပြန်ရင်း အနာဖက်ကို အရသာခံခွာစားနေသူတွေရယ်ကတစ်ဖက်မို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပူပေါင်းမှု (ဗမာ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး) ဟာ အဖုတွေအထစ်တွေနဲ့ ထင်သလောက် ခရီမတွင်လှဘူး။
တကယ်လို့သာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဒီထက်ပိုပြီး ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ ပူပေါင်းနိုင်မယ်ဆို မြန်မာ့ပုံရိပ်ဟာ အခုထက်ပိုထွက်နိုင်မယ်။ ဒီထက်မက ဗမာအမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးထက်ကိုကျော်ပြီး ဟိုး ဗိုလ်ချုပ်တို့ မကွယ်လွန်ခင် လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကလို့ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါ ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ပြီး အမျိုးသားညီညွှတ်ရေးကြီး ဖြစ်မယ်ဆို ရာစုဝက်လောက် ဆိုးခဲ့တဲ့ ပုံရိပ်ကို ပျောက်သွားစေမှာပဲ။
မြန်မာက ဆိုးနေတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံရိပ်ကို အသဲအသန် ကျိုးစားပြီး ပုံရိပ်ကောင်းထွက်အောင် လုပ်နေတာကို သတိထားမိတဲ့ ဒီစစ်တကောင်း ဘင်္ဂါလီတွေဟာ မြန်မာ့အခက် ရိုဟင်ဂျာအချက်ဆိုပြီး ကမ္ဘာမှာ မြန်မာပုံရိပ်ဆိုးထွက်အောင် လိုက်လုပ်ရင်း ဖိအားတွေပေးနေတယ်။
ဒီလူတွေက အင်မတန်လည်တယ်။ ပြဿနာကို လူမျိုးရေးပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲ ဘာသားရေးဖိနှိပ်မှု ပုံပေါ်အောင် စနစ်တကျ မီဒီယာတွေကို ဝင်ရောက်ထိုးဖေါက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ အခုမှမဟုတ်ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအများကြီးကတည်းက စနစ်တကျ ပလန်ချပြီး ကြိုတင်စီစဉ် ထိုးဖေါက်နေရာယူထားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။
တကယ်တော့ သူတို့ဟာ အတိုက်အခံတွေရဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖေါက်ဖိနှိပ်မှု စွတ်စွဲချက်တွေကို မှီတွယ်ပြီး ညောင်ပင်လို ဝါးမျိုခဲ့တာပဲ။
သူတို့ရဲ့ အစီစဉ်က ကိုဆိုဗိုမှာလို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အယ်ဘေးနီးယားတွေ ကမ္ဘာ့ဂရုဏာသက်မှုနဲ့အတူ အောင်ပွဲခံခဲ့တာမျိုး ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်တာ။
မူလက အယူမှန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဆလပ်တွေရဲ့ နေရာကို ခိုးဝင်ရောက်အခြေချလာတဲ့ အိမ်နီးနားချင်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အယ်ဘေးနီးယားက တဖြေးဖြေးနဲ့ အင်အားကြီးထွားလာတော့ မူရင်းဒေသခံ ဆလပ်တွေ လူနည်းစုဖြစ်၊ အဲဒီကနေ အခု ရခိုင်ဒေသမှာလိုပဲ လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်တော့ အယ်ဘေးနီးယားက ပံ့ပိုးပြီး ကိုဆိုဗိုလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်ဆိုပြီးဖွဲ့ ဒီကနေ အယ်ဘေးနီးယား အမျိုးသားတပ်မတော်ဆိုပြီး မူလဒေသခံ ဆလပ်တွေကို သတ်တာတွေ ဖြတ်တာတွေလုပ်၊ အဲဒီတုန်းက ယူဂိုဆလားဗီးယား တစ်နိုင်ငံလုံးမှာဆို ဆလပ်တွေက လူများစု ဖြစ်ပြီး အယ်ဘေးနီးယားအနွယ်တွေက လူနည်းစုပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကိုဆိုဗိုမှာကတော့ အယ်ဘေးနီးယားအနွယ်တွေက လူများစု ဆလပ်တွေက လူနည်းစု အခု ဘူးသီးတောင် မောင်းတောလိုပေါ့။
(၁၄ရာစုက ကိုဆိုဗိုမှာ ဆာတ့်က ၉၆.၆% အယ်ဘေးနီးယားက ၃% ပဲရှိတယ်၊ အဲ ၁၉၉၁ ရောက်တော့ အယ်ဘေးနီးယားက ၈၁.၆% နဲ့ ဆာ့တ်က ၉% ပဲ ကျန်တဲ့အထိ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်)
ပြဿနာဖြစ်ပြီဆို လူများစု ဆလပ်တွေက လူနည်းစု အယ်ဘေးနီးယားအနွယ်တွေကို အနိုင်ကျင့်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ တကယ်ခံရတာက ကိုဆိုဗိုက လူနည်းစု ဆလပ်တွေ၊ အပြင်ကလူတွေက နကိုယ်ကတည်းက လက်ဝဲ ယူဂိုဆလပ် အစိုးရကို မကြိုက်တာနဲ့ အခုရိုဟင်ဂျာလိုပဲ အယ်ဘေးနီးယားတွေ အငိုပြကောင်းတာနဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ နိုင်ငံတကာ အမြင်မှာ လူများစု ဆလပ်တွေ လူနည်းစု အယ်ဘေးနီးယားတွေကို ဘာသာရေးအကြောင်းပြုပြီး နှိပ်စက်တယ်ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး မီလိုဆီဗစ်တို့လို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆလပ် (ဆာ့တ်) တွေ ဝင်လာတော့ နိုင်ငံတကာအမြင်မှာ ဆလပ်တွေဟာ လူရိုင်းတွေ လူဆိုးတွေလို့ မြင်သွားရရော။
အဲဒီကိုဆိုဗိုစစ်မှာ မွတ်ဆလင်ညီအကို ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ ဘာသာရေးအရဖိနှိပ်မှုလုပ်တယ်လို့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေက ဆာ့တ်တွေကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီး အယ်ဘေးနီးယားတွေကို ကူညီခဲ့ကြတယ်။ တောင့်တင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓနအင်အားနဲ့ အားနည်းရာကို ဂရုဏာသက်လေ့ရှိတဲ့ မီဒီယာတွေ လူ့အခွင့်ရေးသမားတွေကို လွှမ်းမိုးပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀န်းဟာ ကိုဆိုဗိုစစ်ပွဲကို အယ်ဘေးနီးယားနဲ့ ဆာ့တ်တွေရဲ့ လူမျိုးရေး ပြဿနာရယ်လို့ မမြင်တော့ပဲ မွတ်ဆလင်လူနည်းကို ခရစ်ယာန်လူများစုက အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တယ်လို့ မြင်ခဲ့ကြတယ်။ အများစုက အယ်ဘေးနီးယားနွယ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကိုပဲ ဂရုဏာသက်ခဲ့ကြပြီး ဆလပ်တွေရဲ့ ရက်စက်မှုတွေကိုသာ ရှုတ်ချကန့်ကွက်ခဲ့ကြတော့ အယ်ဘေးနီးယားတွေရဲ့ ဆလပ်တွေအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့ လူသားမဆန်မှုတွေဟာ မှေးမှိန်ခဲ့ရတယ်။
တကယ်ဆို ကိုဆိုဗိုမှာ အယ်ဘေးနီးယား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက လူများစုဖြစ်ပြီး အယူမှန်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဆာ့တ်တွေက လူနည်းစုပါ။
အခု ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေက ဒီနည်းကို ပုံတူကူးပြီး ကမ္ဘာ့က မြန်မာကို အရိုင်းအစိုင်းတွေမြင်အောင် လုပ်နေကြတာပဲ။
၁၉၈၁ ကိုဆိုဗိုမှာ ဆာ့တ်နဲ့ အယ်ဘေးနီးယား လူမျိုးရေး ပဋိပက္ခဖြစ်တော့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အယ်ဘေးနီးယားတွေက တိုက်ခိုက်လို့ ဆာတ့်လူမျိုး တစ်သောင်းလောက် ကိုဆိုဗိုကနေ ပြောင်းပြေးခဲ့ကြတယ်၊ ဆာ့တ်တွေရဲ့ ရှေးဘာသာရေး အဆောက်အဦးတွေ အဖျက်အဆီးခံရတယ်။ နောက်ပိုင်း ပဋိပက္ခတွေ ခဏခဏဆက်ဖြစ်နေတော့ လူနည်းစုဆာ့တ်တွေက ကိုဆိုဗိုမှာ မနေရဲကြတော့ဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုဆိုဗိုဟာ အယ်ဘေးနီးယားအနွယ် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် လူများစုနေထိုင်တဲ့ အရပ်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။
အခု မောင်းတော ဘူးသီးတောင်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပဲ ပဋိပက္ခဖြစ်ရင် ရခိုင်နဲ့ အစ္စလာမ်ဘာဝင်မဟုတ်တဲ့ လူနည်းစုက ပြောင်းပြေးရပြီ။ ကျောင်းဆရာတွေ ကျမ္မာရေးဝန်ထမ်းတွေ စတဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေတောင် မနေရဲ့ မသွားရဲတော့ဘူး၊ ဒီတော့ နောက်ပိုင်း မောင်းတော ဘူးသီးတောင်ဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်မသွားနိုင်လို့ မပြောနိုင်ဘူးပေါ့။
တစ်နေ့က တိုင်းရင်းသားပါတီတွေနဲ့ မိတ်ဖက် ဒီမိုပါတီတွေ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့တွေ့ပြီး ရခိုင်တွေက ပြည်သူ့စစ်လို တပ်ထောင်ပြီး နယ်ခြားစောင့် တပ်အဖြစ်တာဝန်ပေးဖို့ သွားဆွေးနွေးသတဲ့။ သမ္မတကြီးက ဒီကိစ္စအပေါ် ဘာမှမတုံ့ပြန်ပေမဲ့ မြန်မာပြည်မှာက ဘီဂျီအက်ဖ်လို နယ်ခြားစောင့်တပ် ပေါ်လစီရှိတော့ ရခိုင်တွေတင်ပြချက်ဟာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လို့လည်း ပြောလို့မရဘူး။
ရခိုင်တွေသာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် နယ်ခြားကို စောင့်ရှောက်ရရင် မျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့မို့ နယ်ခြားကနေ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကို ဂယ်ပေါက်တစ်ခုလိုအသုံးချပြီး ခိုးဝင်မဲ့ကိစ္စမျိုး မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ ဒါ့အပြင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူတွေ မနေရဲတဲ့ မောင်းတောလို ဘူးသီးတောင်လို နေရာမျိုးတွေမှာ တပ်စွဲခြင်းအားဖြင့် အဲဒီဒေသကို ထိန်းချုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ရခိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ မျိုးချစ်စိတ် ပြင်းထန်လွန်းတော့ မီလိုဆီဗစ်နဲ့ သူတပ်တွေ ခံသွားရသလို အဖြစ်မျိုး မကြုံအောင် အတော်လေးသတိထားရမယ်၊ ဒီအတွက် စိတ်ဓါတ်မြင့်မားအောင် ပညာပေး လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုမယ်။
ဒါ့အပြင်နောက်တစ်ချက်က နယ်ခြားစောင့်တပ်ဟာ ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ရဲ့ အထိန်းအကွပ်အောက်မှာရှိဖို့လိုတယ်၊ ဒါကလည်း ရာဇဝင်ကို လှေလုပ်စီးပြီး အတိတ်က ရွှေထီးကို ပြန်တမ်းတတတ်တဲ့ အလေ့အထ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတွေမှာ ရှိကြတာမို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ကနေ ခွဲထွက်ရေးတောင်းဆိုတဲ့ တပ်ဖြစ်မသွားအောင်ပါ။
တစ်ဖက်မှာလည်း နိုင်ငံတကာက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေက ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို ဘာသားရေးနှိပ်ကွပ်တဲ့ လုပ်ရပ်ဆိုပြီး ဒါးဆွဲ ဒုတ်ဆွဲ မြန်မာကို ဆဲဆိုရှုတ်ချကြိမ်းဝါးနေတာကို ပြည်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဒါဟာ ဘာသာရေးပြဿနာမဟုတ်ဘူး လူမျိုးရေးပြဿနာပါလို့ ဘာလို့ထွက်မပြောကြသလဲ။ သူတို့ပါ ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေကို မွတ်ဆလင်ညီအကိုများဆိုပြီး ဂရုဏာသက် ဘက်လိုက်ကာကွယ်တဲ့ စာတွေ အပြောတွေလုပ်နေကြတယ်၊ ဒါလည်း မဟုတ်သေးဘူး။
အခုတော့ အားလုံးက ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေ ကြောင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ပြီး ဘာသာရေးပဋိပက္ခယိမ်း ကနေကြတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သတ်ပြီး တစ်ခုသတိရမိတာက ဒီပဋိပက္ခတွေမဖြစ်ခင် တစ်လ နှစ်လလောက်က ဗလီဆောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ အငြင်းပွားမှုတွေ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေနဲ့ စီးပွားရေးအရ အငြင်းပွားမှုတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်ခဲ့တာဟာ တစုံတရာဟာ ဒီလမ်းကြောင်းရောက်အောင် အချိန်အတော်ကြာကြာကတည်းက စီစဉ်နေခဲ့တယ်လို့ ယူဆလောက်တယ်။
အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဘာမှမဆိုင်ပဲ ငါတို့မွတ်လဆင်တွေဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာဘက်လိုက် ပြောနေရေးနေကြတာ အရမ်းသိသာလွန်းတယ်၊ ကမ္ဘောဒီယားနဲ့ ထိုင်း ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းလုပွဲတုန်းက နုတ်ဆိတ်လွန်းတဲ့ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူး ထိုင်းနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဒေါက်တာဆူရင်းဖစ်ဆူဝမ်က အခု ရိုဟင်ဂျာကိစ္စကျမှ အသံထွက်လာတာ အတော်ရုပ်ပျက်လွန်းတယ်။
တကယ်ဆို ရိုဟင်ဂျာပြဿနာကို အဲဒီမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေက ဘာများဖြေရှင်းပေးနိုင်သလဲ၊ အိန္ဒိယက သူ့ထဲဝင်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားတွေကို ပစ်သတ်နေတာကို မွတ်ဆလင်ဘရားသားဆိုပြီး ဘာပြောရဲသလဲ၊ တကယ်ဆို အိန္ဒိယရဲ့ အနောက်ဘင်္ဂလားဟာ အရှေ့ဘင်္ဂလားဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ တနွယ်တည်းသော ဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေနေနေကြတာ၊ အဲဒါကမှ ဘာသာရေးပြဿနာစစ်စစ်။ ပြီးတော့ မြင့်မြတ်ရာနယ်မြေဆိုတဲ့ ဆော်ဒီကရော မွတ်ဆလင်ဘရားသားဆိုပြီး သူ့ဆီရောက်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေရာပေးလက်ခံပါရဲ့လား။
တကယ်တော့ အလာဟ်ကပဲဖန်ဆင်းထားထား ဘုရားသခင်ကပဲ ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုဆို ယေဟိုးဝါးကပဲ ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြောပြော ဗြဟ္မာကြီးတွေကြောင့် ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိ ကမ္ဘာမြေကြီးဟာ နယ်နမိတ်အပိုင်းအခြားတွေ နိုင်ငံအခွဲအခြမ်းတွေနဲ့ စိတ်ပိုင်းထားပြီး ပိုင်ဆိုင်သူအသီးသီးနဲ့ နယ်မြေတွေဖြစ်နေကြပါပြီ။ အဲဒီအပိုင်းအခြားထဲမှာ နေနေကြတဲ့ လူတွေဟာလည်း လူချင်းအတူတူပဲမပြောနဲ့ အမေ၀မ်းထဲက တ၀မ်းထဲ ထွက်ခဲ့ပါစေ ခံယူတဲ့ နိုင်ငံသားချင်းမတူရင် လူမျိုးကွဲပဲ။ ဒီတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ဘာသာတူတူ နိုင်ငံသားချင်းမတူရင် လူမျိုးခြားပဲ။
ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံသား ကွဲကိုကွဲနေရမယ် မဟုတ်ရင် အားလုံးရှုတ်ကုန်မှာ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာနဲ့ လူမျိုး လေ၀မ်းမကွဲသူတွေက ဘယ်လောက်ပဲ အော်နေပါစေ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ဒုတိယကိုဆိုဗိုတော့ အဖြစ်မခံနိုင်တာ မြန်မာမှန်တဲ့သူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပါ။
ကျနော်တို့သာ ဟိုတွေးဒီရေး ပြောနေဆိုနေကြပေမဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် တက်လုပ်နေသူတွေကတော့ ဘာလုပ်ရမယ်ကို စီစဉ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
Credit to Aung Zin Latt (https://www.facebook.com/aung.z.latt.7)
ဦးကျောက်ခဲ က ဦးကျောက်တောင်နဲ့ အမျိုးမတော်စပ်တဲ့ ဗိုလ်ကြီးမလားး။
ဟဲ ဟဲ ဗိုလ်ကြီးရေ…..
အခုတော့ အားလုံးက ဒီစစ်တကောင်းဘင်္ဂါလီတွေ ကြောင်းတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်ပြီး ဘာသာရေးပဋိပက္ခယိမ်း ကနေကြတယ်။
ခင်ဗျားတို့လီးလိုလို၊မှိုလိုလို လုပ်မနေကြစမ်းဘာနဲ့ ။ငါလိုးမသား ဗမာတွေ။
နင်တို့ ဗမာတွေက ရခိုင်ကိုမယုံသလို၊ငါတို့ ရခိုင်ကလီး ဗမာကို လီးပိုင်မကျေ
စာဖတ်သူအဖို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေတော့လို့ပါ
ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြား ခေါင်းပေါက်တိုင်း လူမဟုတ်ဖူးဆိုတာ.. အဲ့တာပဲ..အဲ့တာပဲ
ရခိုင့်သွီးချေ ဆိုတဲ့ နာမည်သုံးပြီး ..
ရခိုင်နဲ့မြန်မာကို လာရန်မတိုက်ပေးနေ လည်း
hnin sai says:
အာရှရဲကိုဆိုဗိုလ်က တောင်ကုတ် ၊အရိုင်းအစိုင်းဘီလူးတွေနေ့တဲ့မြို့ကွ၊ အခုပြသနာက
မြန်မာမွတ်ဆလင်အစ္စဘာသာဝင် (၁၀)ဦး အသတ်ခံရတာကိုမကျေနပ်လို့ ပြသနာပိုကြီးလာတာ
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမြို့အားလုံးကို (အခုအချိန်ထိ)ထမိန်ထုတ်ပို့လို့ပို့၊ ဘရာဇီရာအောက်ခံဘောင်ဘီပို့လို့ပို့လုပ်နေလို့ပြသနာကြီလာတာ၊(နင်တို့တောင်ကုတ်က
အခုထိတောင်ကုတ်တစ်မြို့လုံးဝိုင်းသတ်တာ မျက်မြင်သက်သေမရှိပါဘူးလေး ၊လူတစ်ယောက်မှမမှတ်မိပါလို့တစ်မျိုး၊ လူသတ်မှုမဟုတ်ပါဘူးလူသေမှု ပါဆိုတစ်မျိုး၊ အမှုပိတ်ပြီးအားလုံးကိုလွှတ်ပေးမလို့လုပ်နေလို့မကျေနပ်လို့ပေါက်ကွဲနေကြတာ။
လွန်ခဲ့တဲနှစ်တွေမှာလဲအကြိမ်ကြိမ်နင်တို့မြို့မှာ ဗလီကိုမီးရှို ပြီးသာသနာမြေမှာအိမ်ဆောက်လိုဆောက်၊တောင်ကုတ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းဆရာ၊
မီးရှို၊လူသတ်တာလုပ်ခဲ့တာအကြိမ်အရေများပြီဘဲ လူမျိုးရေးမှမဟုတ်တာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဆိုသတ်မယ်ဆိုတော့ ဘာသာရေးနှိပ်ကွတ်မှုဘဲ ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကို တောင်ကုတ်မှာလုပ်သလိုသတ်ကြ၊ခုတ်ကြ ပစ္စည်းတွေကိုမီးရှိုကြမယ်ဆိုတော့မှသွေးလန့်မနေနဲ့ သူတို့လဲနင်တို့ကိုလက်စားချေမှာဘဲ
ဒါကြောင့်ဒီပြသနာအားလုံးရဲ့အစ ဟာေ တာင်ကုတ် (ဒါကြောင့်နင်တို့တောင်ကုတ်ဟာမြေပေါ်ကပြောက်ကွယ်သွားသင့်ပြီ)
ဒါကြောင့် ရခိုင်တောင်ပိုင်းဟာ တောင်ကုတ်ဟာ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဘဲ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ကတောင် သူ့လူမိူးတွေကို လက်မခံတာ ငါတို့ က လက်ခံထားရမှာလား။ ကိုယ့်နိုင်ငံ ထဲ့မှာ နေပြီး ကိုယ်လူမိူးတွေသတ်ဖြတ် နေတာ လမ်းဘေး ခွေးလောက်အဆင့်မရှိတဲ့ ကုလားတွေ ကိုကြာတယ်ကွာ အကုန် ရှင်းပစ် လိုက်.. လူသားချင်းစာနာမှု တွေ ဘာတွေ ဒီကုလားတွေအပေါ်မှာလုပ်မနေနဲ့ မင်းတို့ ငါတို့ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒီကောင်တွေက မင်းတို့ ကိုရှင်းပြီး မင်းအမေ မင်းအမ မင်းညီမ အကုန်တက်ခွ -ိုး သွားမှာ..ရိုင်းတယ်လို့တော့မပြောနဲ့ မခံချင်လွန်းလို့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင် ဝင်ပါလိုက်ရမှတော့ ကျေနပ်တယ်နဲ.တူတယ် မင်းက ပီးရင် ဟိုလူ.စွပ်စွဲလိုက်
ဒီလူ.ကလော်ဆဲလိုက် မင်းကိုမင်းနိုင်ငံရေးသမားလို.ထင်နေလား???? မင်းအဆင့်အပေါစားဂျာနယ်လစ်
အဆင့်လောက်ပဲရှိတဲ့ကောင်ပါကွာ :-) သိပ်မှန်ပါတယ်ဦးကျောက်ခဲ မဖြစ်နိုင်ဝူးလို.ဘယ်လိုမှ ပြောလို.မရဝူး
ဦးကျောက်ဆောင်တွေလာလုပ်မနေနဲ. မင်းတို.အရှုပ်ထုပ်ကိုမင်းတို.နေရာမှာမင်းတို.ရှင်း ဒီထဲကို
သယ်သယ်မလာနဲ. အစလေးဆွဲထုပ်ပီး ရူးသလိုကြောင်သလိုလုပ် ပီးရင်လာပါလိမ့်မယ် ပို(စ်)ပိုင်ရှင်
ဗမာတစ်ပြည်လုံးတင်မက ကမ္ဘာပါကျော်အောင် အွန်လိုင်းမှာပါ ငါးစိမ်းသည်လိုရန်ဖြစ်တာ မင်းတို.တွေပဲ
ချင့် ယုံလိဖန် says:
သူလဲလေ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးတွေမို့ ဝူးဝူးဝါးဝါး လုပ်ချင်ရှာတာဖြစ်၏
အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေက ဘာမှမဆိုင်ပဲ ငါတို့မွတ်လဆင်တွေဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာဘက်လိုက် ပြောနေရေးနေကြတာ အရမ်းသိသာလွန်းတယ် ၊
အဲ ဒါ အဲဒါ ပေါ့ ရွာသားရေ ။
ဟေ့ ကောင်ကက်ပတိန်စုတ် လူစကားပြော၊ထမင်းစားပြီး လူ့ အသိဥာဏ်မှီတဲ့စကားပြောပါ။
ကျနော်ကိုယ်တိုင် အေးဆေးနေတာ။ဘယ်အရှုပ်အထုပ်မှ ကျနော်ဝင်မပါဘူး။မျိုးနဲ့ ရိုးနဲ့ သွေး
ပါဖောက်ထုတ်ပြစ်လို့ ရတယ်။အဲ့လောက် မျိုးစစ်တဲ့ကောင်ပါ။သိပ်ပြီး သတ္တိရှိနေရင် မင်း နာမည်
နဲ့ လိပ်စာ ပြောစမ်းပါ။မကျေနပ်ရင် ကြိုက်ရာမှာ ရှင်းလို့ ရတယ်။သံတွဲမြို့့မှာမင်းကြိုက်တဲ့
့နေရာ မယ်မေးနိုင်တယ်။အေး ကျနော်နဲ့ ကင်းတဲ့လူ၊ကျနော့်မိဘ ကျောဇူးနဲ့ လွတ်တဲ့လူ လက်ညှိုး
ထိုးမလွဲဘူး။မင်းလာလည်ရင် သိပ်မေးရ၊စမ်းရမှာ မဟုတ်ပါ။
lay phyu says:
စကားပြော တာ ဒီလောက်ရိုင်းရသလား ဟဲ့
ပွိုင့် လေးထောင်ကျော်နဲ့ စီနီယာကြီး အနေနဲ့ လွန်လွန်းတယ်ဟဲ့
တခါတည်း လူမိုက်ကြီးဟန် ဆောင်နေပြန်တော့
နေ့ သစ်/ ဘဝသစ် says:
ပြည်တွင်း မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်တွေကိုယ်တိုင် ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်ဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ဘဝဆိုတော့။။။။
နေ့ သစ်/ ဘဝသစ် ရေ..
မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေရှိနေတဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတာကို ကြည့်လိုက်ပါ..
မွတ်စလင်တွေက ဘာသာရေးဖိနှိမ်ခံနေရပါတယ် လို့ အာပြဲကြီးအော်နေတတ်ကြပြီး
နောက်ပြီး..မွတ်စလင်အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဘာသာရေးပြသာနာနည်းပါး
ပြီး သာသာယာယာရှိတတ်တာ မထူးဆန်းဘူးလားဗျာ။
ma haw says:
အရမ်းကောင်းတဲ့အခင်းအကျင်းလေးပါ အလုပ်လုပ်ရင်းခိုးဖတ်တာတောင်တခါတည်း ပီးအောင်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်
အ၇မ်းကောင်းတဲ့ ဥပမာနဲ့ပေးသွာတာ စိတ် ၀င်စားစွာအစအဆုံး ဖတ်သွားပါတယ်။။အရမ်းကောင်းပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာဘို့ အရေးကြီးပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက မူဆလင်တွေပဲ၊
အဲဒီဘာသာတရား အယူလောက်ဆိုးတာတော့ မရှိနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်၊
တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဘယ်လူမျိုး၊ ဘယ်ဘာသာတရားနဲ့မှ မတည့်တဲ့ ဘုံရန်သူဖြစ်လာတာ မွတ်ဆလင်တွေပဲ၊
အသေခံ ဗုံးခွဲတဲ့ အကောင်တွေလဲ မွတ်ဆလင်တွေပဲ ၊
သူတို့ရဲ့ ဘာသာရေးကြောင့်အစွန်းရောက်မှုဟာ နာဇီဝါဒ၊ လက်ဝဲ၀ါဒီ တွေထက် ပိုကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုးကျိုးပေးတယ်။
အမျိုးပျောက်မှာတောင် ကြောက်နေရပြီဗျ ။
မိုးထဲရေထဲမှာထားတာဘယ်သူလဲ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းမှ မင်းတို့အယောင်ဆောင်တွေဘဲရှိပြီ
ပေးလိုက်တာ အစ္စလာမ်တွေကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဘဲ၊ အဲဒီဘုရားသခင်ကလူသား
မင်းတို့ပါစပ်မှာ -ီးတပ်ပေးလိုက်ပြီး အောက်အပေါက်ကသွင်းလို့ဖန်တီးပေးလိုက်ရင်
မတတ်တာ၊ လူသေပြီးဘယ်ေ၇ာက်လဲမင်းသိလား၊. .မင်းတို့သေပြီးကုလားပြည်မရောက်
ဘူးလို့ ထင်လို့လား၊မင်းတို့ရက်ရက်စက်ဘာမှအငြိုးမရှိဘဲ သတ်ပြစ်လိုက်တာမင်းတို့
ငါတို့ကရင်တွေကိုလာလုပ်လို့ကတော့ ကျည်ဆန်ဘဲပေးမယ် ..
ကရင်အရေချုံ ကလီး မင်းတို့ဆီ ဘာ့ကြောင့် မရောက်သလဲ ဟုတ်လား
မင်းတို့က တိုင်းရင်းသားမဟုတ်လို့ပေါ့ကွ ရှင်းပြီလား
ဘယ်တော့မှ မမျှော်နဲ့ ဘယ်တော့မှ မလာဘူး
ဆတ်…ီး ခွေးမျှော် ဖြစ်နေအူးမယ် ။
လူဦးရေတိုးပွားရေး (population building) နှင့်မြေပြင်ရှုခင်းပြောင်းလဲရေး
(landscape alteration) အတွက်ဗလီတွေဖြစ်နိုင်သမျှများများဆောက်သည်။
မောင်တောမြို့ ပေါ်မှာဗလီ ၃၀၀ ကျော်တည်ဆောက်ထားကြောင်းသိရပါသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမ်းသို့ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသူဘင်္ဂလီလူမျိုးများ၏အဆုံးစွန် ရည်မှန်းချက်မှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရရေးသီးသန့် နယ်မြေ
တစ်ခုရရှိရေးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသဖြင့် ရင်မောမိပါသည် ။
ဦးဦးးပါလေရာ ရယ်။ ဆက်သွယ်ဝန်ကြီး က ပေးတဲ့ ဒုက္ခ က အရင် လယ်ယာဝန်ကြီး က ပေးတဲ့ ဒုက္ခလောက် ဘယ်ကြီးပါ့ မလဲ။
တာဝန်မကျေရင် ဖမ်းပြီး ထောင် ချ တဲ့ အထိ နော်။
မောင်တောမြို့ကလေးပေါ်တင် ဗလီ ၃၀၀လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့
အင်း…..ဗဟုသုတရပါတယ်။ ၀င်ရောက်လဲ ဖတ်ရှုခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ လူဦးရေ ပြန့်ပွားနှုန်း (ပေါက်ကွဲနှုန်းဆို ပိုမှန်မလားမသိ) သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ တယူသန်အတွေးအမြင် ရှိထားတော့ ပိုဆိုးတယ်။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု၊ ဘာသာရေးခုတုံးလုပ်ပြီး ရှင်သန်ကြီးထွားလာခဲ့တော့ သူတို့ကိုယ်တိုင်အပါအဝင် ဘယ်သူမှထိန်းညှိ မရတော့သလို ဖြစ်နေပြီ။ အရေးကြီးတာ ကြားကငထွား မခံရဖို့ နေတတ်ထိုင်တတ် အမျှော်အမြင်ရှိကြရမယ်။ အခြေခံအားဖြင့် ပြည်တွင်းစည်းလုံး ညီညွှတ်မှုရှိထားဖို့၊ ကိုယ့်ဖက်မှာ တန်ပြန်အစွန်းရောက်ဝါဒ မထွန်းကားဖို့၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး တိုးတက်နေဖို့ပဲ။ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အနေအထားအရ အမေရိကန်နဲ့ အီးယူကနေ ရခိုင်ပြသနာ ရှေ့တန်းတင် ဖိအားပေးမယ်လို မယူဆဘူး၊ အပျော့နည်းသုံး ချဉ်းကပ်လိမ့်မယ်။ အတိုက်အခံနဲ့ စစ်တပိုင်းအစိုးမရ ဟန်ချက်ညီညီနဲ့ ရခိုင်ပြသနာ ကိုင်တွယ်သွားနိုင်သ၍ ပြင်ပဖိအားကို ရင်ဆိုင်သွားလို့ ဖြစ်နိုင်တယ်။ သတိပြုရမှာ မဖြစ်နိုင်တာ မလုပ်မိဖို့နဲ့ အဖြစ်သင့်ဆုံးကို ရွေးကြဖို့ပါ။ ဘင်္ဂါလီပြသနာကို ရေရှည်မျှောသွားတာထက် ဖြေရှင်းရန် အခြေခံမူ တိတိကျကျ ချမှတ်ဖို့ ယနေ့အချိန်သည် အခွင့်အရေးတခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငွေရှိတဲ့.. အစ္စလမ်မစ်အစွန်းရောက်နိုင်ငံတွေ.. သူတို့ရပ်တည်မှုအတွက်တောင်… ယားလို့တောင်မကုတ်အားပါဘူး..
မြန်မာပြည်ဖက်လှည့်ဖို့နေနေသာသာ.. သူတို့ကိုယ်ပိုင်နယ်တွေတောင်.. အသည်းအသန်တွေဖြစ်နေတာပါ..
အခုကိစ္စတွေကို.. မြန်မာလူထုက.. ၀င်မပါရင်အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိတယ်..
အတိုက်အခံ NLD နဲ့.. အစိုးရကို.. အပြီးလွှဲထားသင့်ပါတယ်..။
ဒဂျီးနဲ့ ကအောင်ပုကို စိမ်းသွားပါဂျောင်းနဲ့… ဒါမျိုးဆို လုံး၀၀င်မပါတာဟာ ကူညီရာရောက်တယ်လို့ လုံးဝယုံကြည်ထားတယ်။ အခုက ဟီး.. ဟီး ဟိုဘက်မှာ ဒဂျီးကို ရှာမတွေ့လို့ .. ဒဂျီး နောက်တစ်ပတ်ဆို ဒဂျီးကို သများအပီအပြင်နှိပ်စက်တော့မှာနော်.. ကြိုပြောထားဒယ်…
( ငွေရှိတဲ့.. အစ္စလမ်မစ်အစွန်းရောက်နိုင်ငံတွေ..သူတို့ရပ်တည်မှုအတွက်တောင် ယားလို့တောင်မကုတ်အားပါဘူး
မြန်မာပြည်ဖက်လှည့်ဖို့နေနေသာသာ.. သူတို့ကိုယ်ပိုင်နယ်တွေတောင်.. အသည်းအသန်တွေဖြစ်နေတာပါ..)
ကျုပ်ပြောခြင်နေတာက အဲ့ဒါဘဲ ပြောမတတ်လို့
ဥပမာ အိမ်နှစ်အိမ်ရန်ဖြစ်ထားဘူးတယ် နှစ်အိမ်စလုံးက သူ့ပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ကိုယ်စီရှိတယ်
အဲ့သည်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကို အကြံဖန်လုပ်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတဲ့ ရွာလူကြီးအဖွဲ့၇ှိသပေါ့
အဲ့သည်အခြေနေမှာ နှစ်အိမ်ထဲက တစ်အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ကို ခဲကျလာတယ်
ကျန်တဲ့အိမ်ရဲ့ ခြံရှေ့မှာ ချီးဒဘုံ လာပါသွားတယ်
အမှန်အဲ့သည်ပြဿနာကို လုပ်တာက ခွေးမသားရွာသဂျီးအဖွဲ့ ( ကျုပ်တို့သဂျီးမင်းဦးခိုင်ဟုတ်ဘူး )
ဒါ့ကြောင့်အရင်တွေကတည်းက ပြောနေကြတယ် ဘင်္ဂလီတွေမှာ သေနတ်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုပြီး
မသကာ ဓါးပြတိုက်ဘို့ဘာဘို့လောက် လေးငါးဆယ်လက်ပေါ့
ဘယ်ခွေးသူတောင်းစားက မြှောက်ပေးတာကို အဟုတ်မှတ်ပြီး ဘာဖြစ်နေကြတာလည်း
ကျုပ်ကတော့ သဂျီးအဖွဲ့ကဘဲ ကလားဟန်ဆောင်လိုက် ရခိုင်ဟန်ဆောင်လိုက် ကလဖန်ထိုးနေတယ်ထင်တာဘဲ
တစ်ခုရှိတာက အခြေနေအရ ပြည်တွင်းမှာ အမှန်တစ်ကယ်မွေးဖွါးလာသူတွေကိုတော့
ကျုပ်တို့က လက္ခံပေးရမယ်ထင်တာဘဲ ( အထင် )
အဲ့ခါကြရင်လည်းသတိထားကြအုန်း ခွေးမသား လဝကတွေကတော့
ကျုပ်ကတော့ အဲ့သည်ကောင်တွေကိုဘဲ သတ်ခြင်နေတာ ကွိကွိ
အဲ့ဒါကြီးကို မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ လီးဘဲပေါ့ကွာ
ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဟာအာရှရဲ့ ကိုဆိုဗို ဖြစ်လာနိုင်မလား ဆိုတာကတော့ အလွန်အကျူးရေးဖွဲ့ရာရောက်ပါတယ်။ သေချာပြန်တွေးကြည့်ကြပါ။ ကိုဆိုဗို အဖြစ်အပျက်တွေကို။
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးက ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသယ်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးကို အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြီးသားပါ။ ခိုးဝင်လာပြီး နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့သူတွေကို လက်ခံဖို့ဆိုတာ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတာ။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး ဒီကိစ္စကို ကောင်းကောင်း ကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ။
ဘာကောင်တိလဲကွာ။မဆီမဆိုင် ပြောခွင့်ရှိလို့ ဒီနေရာကိုရောက်
နေတာကွ။ပြောမယ် ဆိုမယ်၊ဆွေနွေးမယ်၊တောင်းဆိုမယ်။ဒါငါတို့ 